ဗွီဒီယို သတင်းများ ၊ The Burmese monks who preach intolerance against Muslim Rohingyas. | Danya Wadi
»သတင်းများ»ဗွီဒီယို သတင်းများ ၊ The Burmese monks who preach intolerance against Muslim Rohingyas.
Posted by danyawadi on December 5, 2012 in သတင်းများ, Videos
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှုတ်ဆိတ်ပြီးတော့ ရပ်နေရင်လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု တရားခံစာရင်းထဲမှာ သူလည်း ပါလာလိမ့်မယ် …
ရခိုင်ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီး →